Dayuuradaha Mareykan oo laga cabanayo - BBC News Somali
Dayuuradaha Mareykan oo laga cabanayo
27 Luulyo 2012
Image caption Dayuuradaha Mareykanka ee aan cidina wadin
Iskudhicii lagu sigto ee ugu khatarsanaa hawada Soomaaliya waxaa ku lug yeeshay dayuurad rakaab ah oo sidday ciidan ka badan boqol askari oo ka tirsan ciidanka nabad ilaalinta Midowga Afrika horraantii sanadkan.
Waqti yar kaddib markii ay ka kacday garoonka dayuuradaha ee caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, duuliyaha dayuuraddaasi waxaa uu ku sigtay inuu ku dhaco dayuurad nooca aan duuliyaha lahayn, ayay sheegtay warbixinta Qaramada Midoobay, waxaana uu duuliyaha dayuuradda rakaabku markiiba beddeshay jihada uu u socday si uu shilka uga badbaado.
Taliyaha ciidanka midowga Afrika waxaa uu markaas kaddib qoray warqad ku baaqaysa kulan degdeg ah si looga hortago shil caynkaas oo kale ah marka la eego halista ay u leedahay ciidankiisa iyo duulista hawada guud ahaan.
Baaritaanka Qaramada Midoobay ee daboolka ka qaaday shilkaas lagu sigtay ma uusan sheegin in dayuuraddan aanay cidina wadin uu Maraykanku lahaa iyo in kale. Laakiin baaritaanku waxaa uu xusay in warqadda taliyuhu uu qoray ay ka hor imanayso macluumaad ay Washington siisay Qaramada Midoobay oo sheegayay in tiro yar oo ka mid ah dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee Maraykanka la siiyay ciidanka Midowga Afrika.
Warbixinta qaramada midoobay waxay daboolka ka qaadday shilal kale, oo ay ka mid tahay dayuurad aanay cidi wadin oo ku burburtay xero dad qaxooti ah ay ku jireen, iyadoo wax khasaare ah aan la soo sheegin, iyo dayuurad kale oo noocaas ah oo dulmartay keyd weyn oo shidaal ah oo haddii ay ku dhacdo halis ah.
Warbixinta qaramada midoobay waxay sheegtay in isticmaalka dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Soomaaliya ay noqon karto ku xadgudub cuna qabateyntii xagga hubka ee Qaramada Midoobay saartay waddanka Soomaaliya.